Omelette namazambane, zucchini noshizi | Ukupheka Kwekhishi
I-omelette yamazambane, zucchini kanye noshizi
UMaria vazquez | 04/07/2021 10:00 | Ungadliwa Kwemifino, Ukupheka Okulula
NgoLwesihlanu kufana nezindlu ze-tortilla, ikakhulukazi ngalesi sikhathi sonyaka. Ehambisana nesaladi likatamatisi kanye / noma upelepele othile oluhlaza, kuba isidlo sakusihlwa esingcono kakhulu, awuvumi? Futhi noma ngabe i-omelette yamazambane iyintandokazi yethu, ne-zucchini ngesizini ephelele, lokhu amazambane amazambane, i-zucchini kanye noshizi akunakuphikiswa.
Ama-tortilla asivumela ukuthi sidlale ngezithako eziningi. Ngakho-ke, isizini ngayinye singenza izinhlobo ezahlukahlukene sisebenzisa ukudla kwesizini okufana nalokhu, i-zucchini. Ukudla okuhambisana nezinto eziningi futhi esingalungisa ngakho kokubili izitsha ezimnandi - emasontweni ambalwa alandelayo sizolungisa ikhekhe elizokhumula isigqoko - kanye nosawoti.
Ngo-anyanisi noma ngaphandle kuka-anyanisi? Impikiswano yaphakade. Ngiyawathanda ama-tortilla no-anyanisi yingakho nami ngiwufakile kulena enamazambane, i-zucchini kanye noshizi, kepha labo abangenalo lesi sithako bangenza ngaphandle kwaso. Kunoma ikuphi, kuzame!
Le omelette yamazambane, i-zucchini kanye noshizi iyisiphakamiso esihle sedina esihambisana nesaladi likatamatisi noma upelepele oluhlaza othosiwe.
1 amazambane aphakathi
I-1 tranchete yoshizi
Sihluba amazambane bese siwasika, ngokuchofoza, ngamakhasi amancane.
Siquma u-anyanisi bese uyidayisa i-zucchini ngesikhumba.
Sishisa uwoyela omningi kusatini futhi sithosa amazambane, u-anyanisi ne-zucchini okunongwe ngomlilo ophakathi, kuze kube yilapho amazambane esethenda futhi eqala ukuhlukana.
Ngemuva kwalokho sikhipha amazambane, u-anyanisi ne-zucchini epanini, ukuzikhipha kahle nokuwagcina kamuva esitsheni esikhulu.
Ngemuva sishaya amaqanda kwesinye isitsha, ukuwafaka esitsheni samazambane nokuxuba kahle.
Epanini esizokwenzela kulo i-tortilla, sishisa isipuni samafutha bese uthela le ngxube kanye ne-tranchete yoshizi. Imizuzu embalwa sihlangana ne-spatula sengathi sizolungisa iqanda eliqhuqhiwe. Kamuva, sikuvumela ukuthi kwenziwe ngakolunye uhlangothi bese siyiphendula ukuze siyipheke okwemizuzu embalwa.
Sikhonza i-omelette yamazambane. i-zucchini noshizi ukujabulela.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ungadliwa Kwemifino » I-omelette yamazambane, zucchini kanye noshizi
Ikhekhe lelamula ngaphandle kwehhavini
Umzala onenkukhu kanye ne-broccoli